Android အတွက်အကောင်းဆုံးရှင်သန်မှုဂိမ်းများ Androidsis
ဟိုဆေး Alfocea | | Android ဂိမ်းများ
Androidsis တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် "အကောင်းဆုံးဂိမ်းများ" သို့မဟုတ် "အတွက်အကောင်းဆုံးအသုံးချပရိုဂရမ်များ" အမျိုးအစားများစွာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယနေ့တွင်၎င်းသည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးအခင်းအကျင်းများထဲမှတစ်ခုအလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘယ်တော့မှပိုကောင်း: ရှင်သန်မှုဂိမ်းများ.
အမှန်တရားကတော့ဂိမ်းအများစုမှာသင့်ကိုအသက်ရှင်ရန် (ဆက်လက်) သို့မဟုတ်သေဆုံးရန် (ဂိမ်းကိုရှူရန်) ခွင့်ပြုတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိတယ်။ ဒီရေတွက်သောဘဝများက၎င်းကိုသက်သေပြနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ရှင်သန်မှုဂိမ်းအကြောင်းပြောကြတဲ့အခါငါတို့ဆိုလိုတာက၊ အသကျရှငျနေ၏များ၏လုပ်ရပ်သော့ချက်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့်အတွက်ဂိမ်း ကြံစည်မှု၏။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါကသို့မဟုတ်မဟုတ်သည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်သင်သာဆုံးဖြတ်နိုင်သည့်အရာဖြစ်သော်လည်းရှင်းလင်းသောအချက်မှာဤအခင်းအကျင်းသည်ခေါင်းစဉ်ကောင်းများရှိသည်၊ ထို့ကြောင့် Android အတွက်အကောင်းဆုံးရှင်သန်မှုဂိမ်းများကိုကြည့်ကြပါစို့။
2 Minecraft: Pocket Edition ကို
4 Lifeline ဂိမ်းစီးရီး
5 အပြင်မှာ: Ω Edition ကို
ငါနောက်တစ်ကြိမ်ဒီဂိမ်းအကြောင်းပြောပြပြီးပြီ၊ ပြီးတော့အဲဒါက Android အတွက်အကောင်းဆုံးရှင်သန်မှုဂိမ်းထဲကတစ်ခုအဖြစ်ပြန်ပေါ်လာပြီ။ ဘိုအယူအဆ 2015 ခုနှစ်တွင်ပွဲထွက်ခဲ့ပြီးမကြာမီသောအတွက်အလွန်လူကြိုက်များဂိမ်းဖြစ်လာခဲ့သည် Limbo မှတစ်ဆင့်လှည့်လည်သွားသောသူ၏အစ်မကိုရှာဖွေရမည့်ကလေးတစ် ဦး ၏အမှတ်အသားကိုသင်လက်ခံပါမည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သင်ဟာပဟေlesိတွေဖြေရှင်းဖို့၊ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိကျောင်းတွေကိုအနိုင်ယူပြီးသူမကိုကယ်တင်ဖို့အဆုံးအထိသွားရပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်အစပိုင်းတွင်အကြိမ်များစွာသေဆုံးနိုင်သော်လည်းအလေ့အကျင့်ကသင့်အားရှင်သန်စေလိမ့်မည်။
စျေးနှုန်း: € 4,89
Minecraft: Pocket Edition ကို
Minecraft: Pocket Edition ကို အခြားရှင်သန်ရပ်တည်ရေးဂိမ်းနှင့်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ တကယ်တော့သူကဂိမ်း mode ကိုရှိပါတယ် "Survival Mode" (Survival Mode) ။
ကျပန်းထုတ်လုပ်ထားသောကမ္ဘာများကိုရှာဖွေပါ။ ရိုးရှင်းသောအိမ်မှကြွယ်ဝသောရဲတိုက်အထိအံ့သြဖွယ်ရာများကိုတည်ဆောက်ပါ။ အကန့်အသတ်မရှိသောအရင်းအမြစ်များဖြင့်ဖန်တီးမှုပုံစံတွင်ကစားပါ (သို့) အန္တရာယ်ရှိသောသတ္တဝါများကိုဖယ်ရှားရန်လက်နက်နှင့်သံချပ်ကာများကိုရှင်သန်ရပ်တည်ရေးစနစ်ဖြင့်ကမ္ဘာကြီးကိုကြီးကြီးမားမားမြှင့်တင်ပါ။
နောက်ထပ်ကမ္ဘာ့ဖလား တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် စွန့်စားမှုဂိမ်း ၎င်းသည်ရူပဗေဒပညာရှင်တစ် ဦး ၏အမှတ်အသားကိုသင်ယူဆလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်မတော်တဆအခြားဖြစ်ရပ်တစ်ခုတွင်အဆုံးသတ်သွားသည်။ သင်၏ရည်ရွယ်ချက်သည်ပဟေlesိများနှင့်လူဆိုးများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များကိုအဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ရန်အစီအစဉ်ကိုကြံစည်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ရန်ဖြစ်သည်။
သိချင်စိတ်အဖြစ် နောက်ထပ်ကမ္ဘာ့ဖလား ၎င်းသည် ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် Amiga အတွက်တီထွင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းနှစ်များတစ်လျှောက် platform များစွာသို့တင်ပို့ခဲ့သည်။
ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Lifeline ဟုခေါ်သောရှင်သန်မှုဂိမ်းတစ်ခုလုံးကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဂိမ်းတစ်ခုချင်းစီ၌တည်၏ ရေဒီယိုလိုအရာတစ်ခုကိုသုံးပြီးသင်သာဆက်သွယ်နိုင်တဲ့သူကိုသင်ကူညီရပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်ကသူတို့ကိုမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်အောင်ကူညီပေးဖို့နဲ့ဂိမ်းရဲ့အဆုံးကိုကြည့်ဖို့လုံလောက်တဲ့အသက်ရှည်ရှည်နေဖို့ဖြစ်တယ်။
ခေါင်းစဉ်အားလုံးသည်အလွန်ရိုးရှင်းသောဂိမ်းကစားခြင်းဖြစ်သဖြင့်၎င်းတို့သည် Android Wear တွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ကြသည်၊ သူတို့သည်စျေးသိပ်မကြီးသောကြော်ငြာများသို့မဟုတ် ၀ ယ်ယူမှုများမပါ ၀ င်ပါ။
Lifeline ဂိမ်းများကိုစုဆောင်းရယူနိုင်ပါသည် ဒီမှာ.
အပြင်မှာ: Ω Edition ကို
En အပြင်မှာ သငျသညျအာကာသယာဉ်မှူးဖြစ်လိမ့်မည် သူဟာနှစ်ပေါင်းများစွာ cryogenized ပြီးနောက်နိုးတော်မူပြီယခုသင်တစ် ဦး တည်းနှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအလွန်အမင်းလိုအပ်သည်အတွက် "ထွက်ရှိ ... နဂါးငွေ့တန်းရှိဝေးကွာသောနှင့်မသိသောအရပ်ဌာန၌" အမည်မသိအာကာသအလယ်၌ကိုယ်ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သင်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသင်္ဘောကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်၊ အရင်းအမြစ်များရှာဖွေရန်နှင့်ရှင်သန်ရန်ဖြစ်သည်.
အာကာသသည်ရန်လိုသောနေရာဖြစ်သည်။ အန္တရာယ်နှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောစွန့်စားမှုများသည်သင်၏ခရီးစဉ်တိုင်းကိုမှတ်သားဖော်ပြလိမ့်မည်။ သင်လုံးဝဂရုမစိုက်တတ်သောအသိဥာဏ်ရှိသောမျိုးစိတ်များကိုသာမကသင်သည်သင်၏ကံကြမ္မာနှင့်လူသား၏ကိုယ်နှိုက်၏ကံကြမ္မာနှင့်ဆက်စပ်နေသောရှေးဟောင်းအင်အားကြီးများနှင့်လည်းတွေ့ရလိမ့်မည်။ နဂါးငွေ့တန်းတွင်အမှန်တကယ်ရှိနေရာကိုဆက်လက်ရှင်သန်ရန်နှင့်နားလည်ရန်သည်ထိုနေရာမှကမ်းလှမ်းသည့်အရာ၏အဓိကဖြစ်သည်။
၎င်းသည်သင်လုပ်သည့်အရာ ("ဂိမ်းတစ်ခုစီတွင်အသစ်ထုတ်လုပ်ထားသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အတူနဂါးငွေ့တန်းတစ်ခုကိုစူးစမ်းပါ") အပေါ် အခြေခံ၍ ဖွံ့ဖြိုးသောအလွန်ကြီးမားသည့်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်အတွေ့အကြုံနှစ်ခုလုံးအတူတူပင်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒီဂိမ်းမှာလည်း In-App ဝယ်ယူမှုမရှိပါ။
ရေးသားသူ: Mi-Clos စတူဒီယို
ရေးသားသူ: 11 bit နဲ့စတူဒီယို
စျေးနှုန်း: € 11,99
ရေးသားသူ: Camouflaj, LLC မှ
ရေးသားသူ: Asmodee ဒစ်ဂျစ်တယ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » Android အတွက်အကောင်းဆုံးရှင်သန်မှုဂိမ်းများ
Samsung, image ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအကျိုးကျေးဇူးများကိုထိခိုက်ပါဘူးသောအခါ